जनताको जिवन स्तर सुधारका लागि मेरो उम्मेद्वारी - Rajmarg Online
जनताको जिवन स्तर सुधारका लागि मेरो उम्मेद्वारी
बंगलाचुली गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार
स्वागत छ, यहाँलाई ।
चुनावी प्रचारप्रसार र ब्यस्तता कस्तो छ ?
चुनावी प्रचारप्रसार निकै राम्रो तरिकाले सम्पन्न भएको छ । अहिले पनि हामी चुनावी अभियानमै व्यस्त छौ । यसअघि यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकार हुदा जनताले पाएको सास्तिको कारण जनताले माओवादीलाई दोहोराउन चाहादैनन् भने अर्काेतिर गठबन्धनको मत धेरै बदर हुने हुनाले पनि हाम्रो अभियान प्रभावकारी बन्दै अघि बढेको छ ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका लागि तपाईको उम्मेद्वारी किन र केका लागि ?
दाङ जिल्लाको विकट पहाडी जिल्ला भएकाले त्यहाँका जनताका आवश्यकता र समस्या धेरै छन् । आवश्यकता र प्राथमिकताका साथ ति सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्दै हामी अगाडी बढ्छौ । पालिकामा यस अघि माओवादीको सरकार हुदा केन्द्रबाट आउने करोडौँको रमक हिनामिना भएको देखिन्छ भने भ्रष्ट्राचार ब्याप्त छ । पहिलो कुरा हामीले भ्रष्ट्राचारलाई निर्मूल पार्छौ । विकास निर्माणका काम अन्तरगत गाउँमा कलेज नभएकाले कलेज स्थापना गर्छौ । अहिले पनि सहज यातायातको व्यवस्था नभएकाले विरामीलाई स्टेचरमा बोकेर गाउँगाउँबाट अस्पताल ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । सहज रुपमा यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख काम अन्तरगत पर्छ भने कृषिको प्रचुर सम्भावना बोकेको बंगलाचुलीको कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्दै त्यहाँको कृषिलाई ब्यवसायिक बनाउदै बजारीकरणको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने हाम्रो एजेण्डा छ । अब्यवस्थित तरिकाले भैरहेको चुनढुंगा उत्खन्नलाई ब्यवस्थित बनाउदै वैकल्पिक बाटो संचालन गर्ने योजना छ । मुआब्जा वितरण गर्ने योजना छ ।
माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको वंगलाचुली गाउँपालिकाको पाँच वर्षे कार्यकाललाई कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?
माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको वंगलाचुली गाउँपालिकाको पाँच वर्षे कार्यकाललाई मैले असफल भएको रुपमा समिक्षा गरेको छु । केन्द्रबाट आउने ठुला योजना र बजेटको सही सदुपयोग भएको मैले महशुस गर्न सकेन । आफ्ना नाता र निकटका मान्छेलाई फाईदा पुराउने बाहेक जनताको अवस्था सुधार गर्ने खालको काम त्यहाँका जनप्रतिनिधीले पाँच वर्षसम्म गर्न सकेनन् ।
गठबन्धन बलियो बनेर प्रतिस्पर्धामा हुदा नेकपा एमालेले त्यहाँ जित्ने आधारहरु के कस्ता छन् ?
नेकपा एमालेप्रति जनताको आक्रषण राम्रो भएकै कारण बंगलाचुलीमा यस पाली जनताले एमालेको पक्षमा मत दिनेमा हामी ढुक्क छौँ । नेकपा एमालेले केन्द्रबाटै राम्रो काम गर्नु भनेको बंगलाचुलीमा जित्ने आधार तय गर्नु हो । राष्ट्रियता र जनजिविकाको सवालको पक्षमा एक्दमै महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेकै कारण एमालेले जित्छ ।
१,२,३ भनेर भन्नुपर्दा नमुना योग्य त्यस्ता कामका योजना के छन् ?
पहिलो नंम्वरमा कलेज स्थापना गर्ने योजना छ । दोस्रोमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजारलाई व्यवस्थित बजारीकरण सञ्चालन गर्छौ । रोजगारी प्रवद्र्धन गर्छौ । सर्वदलिय सर्वपक्षिय सल्लाह सुझाव लिएर हामीले गर्ने विकास निर्माणको योजना र एजेण्डा बनाएर काम गर्छौ ।
पाँच वर्षमा बंगलाचुलीका जनताको जिवनस्तर कस्तो परिवर्तन आयो र अव यहाँको जित पछिको पाँच वर्षमा जनताको जिवन स्तर कस्तो हुन्छ ?
जिवनस्तर पाँच वर्ष पहिले जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । जनताको जिवन स्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी खासै कुनै काम हुन सकेको देखिदैन । अहिले पनि खाडी मुलुक जाने र भातरका विभिन्न ठाउँमा जानेहरुको क्रम रोखिएको छैन् । त्यसैले भोली हाम्रो जित पछि हामीले बंगलाचुलीमा परिवर्तन ल्याउने छौँ । जनताले चाहेको विकास गर्दै जनताको मन जित्छ ।
अन्त्यमा त्यस्तो केही छ ?
अहिले मदनभण्डारी राजमार्ग पिच गर्ने नाममा नामको कालोपत्रे बाहेक राम्रो काम हुन नसक्दा जनताले निकै सास्ति पाएका छन् । त्यसको समाधानको कामलाई प्रमुखताका साथ हेरेका छाँै । टिप्पर चल्नका लागि वैकल्पिक मार्ग सञ्चालन अहिले त्यहाँको आवश्यकता हो । अर्कोतिर गाउँपालिकामा रहेका नागरिकहरुको गरिवी पनि हटाउदै समृद्ध नेपाल र खुशी नेपालीको धारणा अनुसार काम गर्ने छु ।
Prevदाङमा राती १२ बजेदेखि मदिरा विक्री वितरण गर्न नपाइने
Nextदुई दिन बन्द हुने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नियमित सेवा